राजेन्द्र महतो फेरि बिरामी
20 Jan 2016 | 15:21pm
स्वेदश फिर्तीभएसँग उनी राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त भएपछि उनलाई पुरानो चोट दुख्न थालेको, ब्लड प्रेसर र सुगरको मात्रा बढेको, रिँगटा लाग्ने जस्ता समस्या देखिएको उनको उपचारमा संलग्न डा. चन्द्रशेखर यादवले बताएका छन्। अध्यक्ष महतो दिल्लीबाट काठमाडौं ओर्लिए लगत्तै राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय भएका थिए। मंगलबार बलिदानी दिवस मनाउन उनी काठमाडौं अाएर उपलब्ध शीर्ष नेताहरुलाई भेटी फर्किएका थिए।
महतो बिरामी परेपछि सिरहाको माडरमा मोर्चाले बुधबार दिउँसो आयोजना गरेको आमसभामा पनि सहभागि भएका छैनन्। चिकित्सकको सल्लाहअनुसार अध्यक्ष महतो हाल लाहानस्थित मारुती होटलको कोठा नं. १५५ मा भर्ना भएर आराम गरिरहेको उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई उदृत् गर्दै सद्भावना पार्टीका सहमहासचिव राजु गुप्ताले बताए। अध्यक्ष महतोको स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझ्न सिरहाका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक सुवर्ण थापा, प्रहरी नायब उपरीक्षक उमा चतुर्वेदी उनी अाराम गरिरहेकाे हाेटलमै पुगेक थिए।